Mon, Jul 16, 2018 | 08:57:47 NST
10:13 AM (9months ago )
पौष महिनाको जाडो साँझ । मैतीदेवीको फाँटको बीच खेतमा टायलको एउटा घर । त्यसको ढोकामा म चिच्याउँदै थिएँ- ‘देवकोटाजी हुनुहुन्छ ?’ माथिबाट कुनै अङ्ग्रेजी ऐतिहासिक किताब जोरसँग घोकेको शब्द आइरहेको थियो । मेरो मनमा लाग्यो सायद हेनरी आदौंका जीवनी पढ्ने यो कुनै मेट्रिकको विद्यार्थीको घरमा म पुगेछु भुलले ।
सेतो पुरानो छिटको धोती लाएकी एक जनाले मेरो नगिच आएर भन्नुभो- ‘माथि ऊ त्यो कोठामा जानुहोस् ।’
जीवनमा पहिलो चोटि देवकोटाजीसित परिचय पाउने उत्साहमा मेरो मन धकमक गरिरहेको थियो । ‘सुन्दरीजल’ र ‘शाकुन्तल’ महाकाव्य लेख्ने कविको साक्षात् दर्शन । भर्‍याङको हरेक खुड्किला पहाड चढे झैं लागेपछि २-२ वटा गरेर म कोठामा उफ्रेर एक्कासी पुगेँ । देखेँ- कालो कम्बलले गुटुमुटु भएर एउटा मैलो फोहोर ओछ्यानमा पल्टेर घोप्टिई देब्रे हातले चिउँडो अडाएर उच्च स्वरमा केही एकाग्र चित्त भै पढिरहेछ । एक मन त लगत्तै फर्कूँ जस्तो लाग्यो सायद वहाँ त्यो महाकवि होइन होला भन्ठानेर । के छ अनुहारमा, कालो फुस्रो मुख छ । कपालका रौं आफूखुशी दश दिशा दौडिरहेछन् । कम्बलबाट निस्केका हातमा झ्याप्झ्याप्ती रौं कालो फुस्रो हात मसी-मसी लागेको । यस्तो मानिस पनि महाकवि ! कोठामा चारैतिर हेरेँ । आँधी झैं हुरी भर्खरै त्यहाँ नाचेर गए झैं हरेक दिशामा कागज छन् । सायदै कुनै किताब सद्दे होला । मसी नघोप्टिएको सुकुलको कुना नराम्रो देखिन्थ्यो- एक कुनामा मात्र उज्यालो भएर होला । कुनै समयमा पोतेको चुन झरिसकेको थियो र आज त्यही भित्तामा एकातिर श्रीकृष्ण, रवीन्द्रनाथ टैगोर, अर्कोतिर अर्को कुनै दाढीवाल बूढो, यिनीहरुको चित्र पेन्सिलले लेखिएका छन् । यतिले नपुगेर फुटेको मकल चारैतिर झरेको खरानी ।
मेरो उपस्थितिको ज्ञान भएछ क्यार, त्यो सङ्गीत अकस्मात् बन्द गरेर वहाँ मतिर हेरिरहनुभएको ।
‘देवकोटाजी ?’ प्रश्नसूचक दृष्टिले हेर्दै मैले सोधेँ ।
‘जी आउनुहोस् ।’ वहाँले जवाफ दिनुभयो । सायद होइन भनेको भए म ज्यादा आनन्दित हुने थिएँ होला । त्यस्तो मानिसलाई महाकवि होलान् भन्ने मैले नसोचेकोले पनि त्यसो हुन सक्छ । नगिच गएर बसेँ ।
”तपाईँलाई चिन्दिनँ !’
‘यो पत्रले चिनाउनेछ’ भनेर मैले आफ्नु मामाको पत्र वहाँको हातमा राखिदिएँ । कमसेकम तीनचोटि माथिदेखि तलसम्म हेरेर अनि फर्केर मतिर हेरी वहाँले भन्नुभयो- ‘उसो भए वहाँको तपाईँ आफ्नै भानिज ?’
पत्रमा थियो देवकोटाजीसँग एउटा अनुरोध । वहाँका लघुकथासंग्रह गर्ने साधन एवं अनुमति । श्री ईश्वर बरालको सम्पादनमा ।
‘मैले लेखेका कथाहरु त कता छन् कता’ सम्झे झैं गरेर वहाँले फेरि भन्नुभो- ‘खस्याङखुसुङ लेख्थेँ बसिबियाँलो गरेर, त्यो पनि काशीबाट आएदेखि त स्थिति नै मिलेको छैन । देखिहाल्नुभो होला !’ चारैतिर कोठामा औंला नचाइदिनुभयो । यो नग्न सत्यताको सहाराले मेरो मनको मैलोपन जम्मै पखालिदियो ।
‘खोजखाज गरेर …’ म भन्दै थिएँ । वहाँ हाँस्नुभयो ।
‘कहाँ ?’ … प्रकाशकी आमाले लेखेर पैसा आउने होइन भनी अस्ति झन्डै फालिदिएकी । बल्ल-बल्ल केही उम्काएर छोराले पो राखेको छ । कागज, कलम, मसी जम्मैमा कर्फ्यु पो लागेको छ ।’
मलाई खिन्नताका साथ हाँस्नैपर्‍यो किनभने वहाँ आफै हाँसिरहनुभएको थियो ।
‘बनारस जाने ?’ सोध्नुभो ।
‘मानिस जानेछन् ४-५ दिनमा । उनकै हात पठाउन पाए असल हुने थियो ।’
‘ठीक भन्नुभयो ।’
‘एउटा चिठी त आजै पठाउँदै छु । तपाईंको पनि केही … ।’
‘हुन्छ… हुन्छ…’ स्वीकार गरेर वहाँले डसना पल्टाउनुभयो । फुलमार चुरोटका ठुटा कमसेकम २७ जति होलान् डसनाको कापमा । एउटा झिकेर मतिर हेर्नुभयो । खल्तीबाट सिङ्गो चुरोट एवं सलाई झिकेर मैले वहाँलाई दिएँ । असल चुरोटलाई ओल्टाई-पल्टाई हेरिदिँदा मलाई त्यस बखत आफैमाथि लाज लाग्यो, किन किन ! चुरोट सल्काएर वहाँले आफ्नु अनुसन्धान जारी राख्नुभयो । अन्तमा निराश भएर मतिर हेरी भन्नुभयो-
‘तपाईँसँग कलम छ ?’
बानीले होला, दाहिने हात झट्ट माथिल्लो खल्तीमा पुगिहाल्यो । तर, अपसोचसाथ मैले भनेँ, ‘छैन, घरमा छुटेछ ।’ थाहा छैन कुन कुनाबाट कान्छी औंला जत्रो सिसाकलम झिकेर वहाँले अगाडि राख्नुभयो । त्यो पनि नतिखारेको ।
‘चक्कु छ ?’
‘…’ आजकल ठिटा कहाँ खल्तीमा चक्कु हालेर हिँड्छन् र ! ओढ्ने छोडेर वहाँ उठ्नुभयो । अनि देखेँ- महाकविको सच्चा रुप । जिउमा सिर्फ एउटा धोती छ । न भोटो, न गन्जी, न कमिज ।
केही नपाएर होला वहाँ त्यसै फर्कनुभयो । अनि ईश्वरीय औजारले कलम ताछ्न लाग्नुभयो दाँत एवं नङ्ग्राले, बीच-बीचमा कुरा हुँदै थियो । वहाँ आफैं बोलिरहनुभएको थियो । मेरो त घाँटीभित्र आगो जलिरहेको थियो !
‘नरेन्द्रजीकहाँ बनारसमा बडो आनन्दमा थिएँ । तर के जन्जालमा आउनू भन्नु लेखेको रहेछ ।’
दाँतको एक झोँकले सिसाकलम भाँच्चियो । लेख्ने एउटै उपाय थियो त्यो पनि … । आज चिठी नलेखिने होला भनेर म निराश भएँ । तर, कविजीले सिसाकलमको काठ झिकेर आखिर एक इन्ची मात्र लामो शीशाले मात्र लेख्न लाग्नुभो । औंलामा हराउने त्यत्रो स्यानो सिसाले पनि लेख्न सम्भव हुँदो रहेछ भनेर मैले जीवनमा पहिलोचोटि थाहा पाएँ ।
मेरो आँखामा खपिनसक्नु आँसु भरिए । मैले सोचेँ- नेपालका महाकविको आज यो दशा छ । एउटा बर्नाड शा छन्, जसका प्रत्येक शब्दको मोल एक रुपियाँ छ र एउटा देवकोटा छन् जसका … साँच्ची, नेपालीहरु मानिस चिन्दैनन् । नेपाली कलाको पूजा गर्न जान्दैन । आफ्नो गौरव पनि बुझ्दैनन् । थाहा छैन, मेरो मनले कत्ति सराप्यो । कत्तिको दुःख पायो । आफ्नो सफा लुगासँग मलाई आफसेआफ घृणा लाग्यो । मेरो असल कलम, घडी, बिलायती जुत्ता … छि: मलाई आफूदेखि घृणा लाग्यो ।
त्यो चिठी त आज मसँग छैन । तर, त्यो बहुमूल्य चिठीको केही वाक्य म अहिले पनि झलझल सम्झन्छु ।
‘महाशय, मलाई अहिल्यै माघ-पुस लागेको छ । माघ झरी झैं मेरो जीवन नै कठाङ्ग्रिरहेछ । मनै मगजमा तुषारो जमे झैं दुःख जमेका छन् । आज मैले लेखेका साहित्य के साहित्य होलान् र ?’
ऐतिहासिक त्यो पत्र, जसको मूल्य सन् २२५२ मा १०,०००।- भन्दा कम होइन, लिएर मनमनै कठाङ्ग्रिँदै म पनि बाहिर निस्केँ ।
मेरो जीवनमा देवकोटाजीसितको यो पहिलो भेट हो । ४-५ दिनपछि एकचोटि आउनू भनेकोले फेरि पुगेँ । स्याना बच्चाबच्ची पिठ्युँमा घोडा चढिरहेका र हाम्रा कविजी एक नयाँ कविताको सिर्जना गरिरहनुभएको । मलाई यो देखेर आश्चर्य लाग्यो ।
मानिस भन्दछन्, कविता लेख्न एकदम एकान्त चाहिन्छ, कुनै किसिमको खलबल कोलाहल हुनु हुँदैन तर, हाम्रा गुरुजीको त्यस्तो परिस्थितिमा समेत लेख्ने विलक्षणता देखेर आश्चर्य लाग्यो ।
‘आहा ! कहानी लेख्न भुसुक्क बिर्सेछु ।’ मनमा ठूलो आशा लिएर म आएको थिएँ । एकदम निराश भएँ । गुरुजी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ‘यो एउटा कवितामा खस्याङखुसुङ अलमलिएको । सुन्नु हुन्छ ?’
कविता थियो अङ्ग्रेजीमा (Prometheus Unbound) प्रिमिथिस अन्बाउण्ड । मैले खोक्रो रवाफ नराखेर भनेका खण्डमा यो भन्नु अत्युक्ति हैन कि देवकोटाजी बाहेक अरु कसैको मुखबाट त्यो कविता सुनेको भए, म आफैंले पनि पढेको भए, मैले बुझ्ने थिइनँ । पृथ्वी आएको प्रथम पुरुषको स्वतन्त्रता लिएर रचिएको थियो त्यो कविता । आठ-आठ पङ्क्तिका एक-एक भर्स र साथै फ्रि भर्समा त्यसको नेपालीकरण । पङ्क्तिको पङ्क्तिमै । त्यसमा अनौठो प्रयोग जुन गुरुजीले गर्नुभएको थियो, त्यो हो नेपालीकरण पनि आठै पङ्क्तिमा । फेरि यो पनि हैन कि एक भर्सलाई लिएर त्यसको सीधा अनुवाद । अङ्ग्रेजीमा आठ लाइन, नेपाली आठ लाइन । अङ्ग्रेजीको जुनसुकै लाइनसँग नेपालीको उही नम्बरको लाइन मिलाउनु उही रुपमा । फेरि कतै नमीठो भए पनि एउटा कुरा । … यदि मैले यहाँ यो भनेँ भने कसैले पत्याउँदैन होला, तर त्यो कविता प्रकाशित भएको खण्डमा गुरुजी बाहेक त्यसलाई राम्ररी पढाउन सक्ने र त्यसको पूर्ण मीमांसा दिन सक्ने मानिस विरलै होलान् कमसेकम यो २५ वर्ष यता । यो कविता अहिलेको नेपाललाई होइन, २५/३० वर्षपछिको नेपाललाई हो ।
‘तपाईँलाई कस्तो लाग्यो ?’ गुरुजीले सोध्नुभयो ।
‘खै, गुरुजी, मैले पत्ता लाउन सकिनँ, मलाई कस्तो लाग्यो ।’ लाग्छ- हामीलाई त्यसबेला, जब हामी राम्ररी तहमा पुग्छौं । मलाई कविता त अनौठो लाग्यो, तर त्योभन्दा अर्कै कुरा अनौठो लाग्यो, भनूँ ?’
‘आम्मै, भन्नुस् न ।’
‘तपाईंँअसमयमा जन्मनुभएछ पो भन्ने पो लाग्यो । तपाईँ जस्ता मानिसको लागि नेपाल बनिसकेको छैन ।’
गुरुजी हाँस्न लाग्नुभयो । ‘तपाईंले त मलाई मानिसै ठान्नुभएन । मेरो भनाइ कवितामा पो छ ।’ म पनि हाँसेँ । अनि सम्झेँ- भोलि मानिस बनारस जाँदै छ । भनेँ- ‘भोलि पनि कहानी पठाउन पाइएन भने … ।’ बोल्दाबोल्दै रोकिएँ के भनूँ भनेर ।
‘कति बज्यो हेर्नुस् त ?’
‘६ बज्न लाग्यो ।’
‘भोलि कुन बेला मानिस जाँदै छ ?’
‘बिहान नौ बजेतिर ।’
‘तपाईँलाई कतिवटा कहानी चाहिने ?’
‘विभिन्न किसिमका १०-१२ वटा र १२ भयो भने छानेर १० वटा सङ्कलन गर्न सकिन्थ्यो ।’
‘१२ कहानी … १२ घण्टा …’ गुरुजी सोच्न लाग्नुभयो । नबुझेर म आश्चर्य मानिरहेको थिएँ । एकैछिनपछि भन्नुभयो ।
‘यसो गरुँ, आज तपाईँ यहीँ बस्नोस् । म बोल्दै जान्छु, तपाईं लेख्दै जानोस् । बिहान ६ बजेसम्म कसो नसकिएला । हुन्न ? थाक्नु त हुन्न हगि ? भोलि बिहान कहानी जम्मै पुर्‍याइदिनेछु ।’
यति सजिलोसँग यो कुरा भनिएको थियो कि मैले पहिले यसको माने नै बुझ्न सकिनँ । जब बुझेँ, अकमकाएँ । रातभरि एक थलामा बसेर लेख्नु रे … न खानु न पिउनु रे … र फेरि घरमा भाइहरु बिरामी ।
‘यसो त कसरी …।’
‘मकहाँ बस्न तपाईंलाई केही आपत्ति छ ? यहीँ खानुहोला नमीठो भए पनि ।’
‘खान त केही छैन, तर रातभरि … घरमा बिरामी छन् ।’
‘उसो भए, जुन बेलासम्म सक्नुहुन्छ लेखौं अनि सकिएको कहानी चाहिँ लैजानुहोला ।’ इन्कार गर्न सकिनँ, थालेँ लेख्न ६ देखि १० बजेसम्म । ४ घण्टामा ५ कहानी लेखियो । महाकविको शक्तिको परिचय मैले त्यसबेला थाहा पाएँ । हामीलाई जीवनका आफ्ना घटनाहरु सुनाउँदा बीच-बीचमा अड्नुपर्छ, वहाँ भने कल्पनाको आधारमा कसरी नयाँ प्लट, नयाँ शब्द एकदमै नदोहोर्‍याई काटकुट नगरी, नअकमकाई भन्दै जानुहुन्छ । कुनै किताब पढे झैं सायद त्यसभन्दा पनि छिटो मैले सर्टह्यान्ड जानेको भए, या रेकर्डिङ गर्ने मसिन भएको भए, मलाई आशा छ र विश्वास पनि त्यस ४-५ घण्टाको अवधिमा १२ वटै कहानी लिएर आउने थिएँ ।
त्यस बखतमा बटुलिएका- म यहाँ जानीजानी बटुलिएको भन्ने शब्द भनिरहेछु किनकि भन्डारमा चामल बटुले झैं लागेकव थियो मलाई । त्यसबेलाका कहानीहरुमा ‘मधुराबोडसी’ र ‘चिनियाँ प्रेमी’ उल्लेखनीय छन् ।
फर्कने बेला कागजको एक मुठो अगाडि राखेर गुरुजीले भन्नुभयो- ‘मकहाँ हराउनेछन् । जो पनि आउँछ, लैजान्छ, हराइदिन्छ । यी अलिकति गद्य र कविता सङ्ग्रह छन्, आफूकहाँ सुरक्षित राखिदिनोस् । तपाईंकहाँ भो भने हराउने छैनन् ।’
घर आएर पोको फुकाएर हेरेँ, पढ्दै गएँ- निद्रा मारेर ! तिनमा उल्लेखनीय छन् – ‘On Smoking’, ‘Existence of God’ र ‘Indian Summer Cloud’ र कवितामा ‘Lord Krishna’ र ‘God’, इत्यादि ।
ती सायद अहिले प्रकाशित भएका छैनन्, तर जब प्रकाशित हुनेछन् अनि हामीले थाहा पाउनेछौं – अङ्ग्रेजी भाषामा पनि देवकोटाजीको कति प्रवाह छ ।
देवकोटाजीको प्रभाव परेर होला, म वहाँका कृतिहरुलाई खोजी-खोजी पढ्न थालेँ । तिनैताक ‘मेरो कोठा’ भन्ने कविता छापियो । मैले त्यस धाराप्रवाहको पहिलो भेटमा के लेखेँ हुँला, त्यति राम्रोसँग गुरुजीले आफ्नो कोठाको र साथै त्यस कोठामा बस्नेहरुको कति सजीव चित्रण गर्नुभएको छ । कविताकै बोलीमा –
सेतो कमेरो भित्तामा, लिउनहरु नाङ्गो किरमिर
उत्तरमा टालेको लिउने कोठाको ढोका, चिरा फाहदार
राता बार भइका पहेँला काठ भएका ढोका, झ्यालका खापा
सेता बलिया दलिन, सङ्ख्या एक्काइस
शक्तिहीन बिजुलीको तार … झिंगामल झिंगामल
दराज झ्यालमा खजमज खोसेल्टा,
किताबहरु छरबर बाङ्गाटिङ्गा,
एक छेउमा ब्लाकबोर्ड सामुन्ने हरियो फ्रेममा किसिम
चुरोट ठुटा, फुलमार्का राता बुट्टा धुजा
आधी फुटेको मकल नगीच, खरानी झार भुवालु–
उस्को बयान …
यो सब मेरो आर्थिक, सामाजिक प्रबन्ध
यो भविष्यलाई औताली …
यो मेरो विश्व सुधार …
जीवन कमाई, व्यापार …
देख्यौं सानो स्वर्गको सपना
लुगु–लुगु काँपी हेर्छन् विपना
निर्मोहिनीको मलो बुढापातिर परिणीत दुःखले झैं ठोकी
बराबर चिम्लिन्छन् तिमी एउटा नजर–
मानौं एउटी बट्टाई
ब्याधाको करमा निराश–
धूर्त मान्छे ! के तेरो सुधार यही हो ?
हीँ, हीँ उदास ?
स्नाथाभावले मैले यो कविता जम्मै दिन सकिनँ, अपसोच छ, तर यदि गुरुजीलाई अझ सफासँग बुझ्नु छ भने यो जम्मै पढ्नैपर्छ । त्यही कविताको एकप्रति ‘शारदा’का साथ आफ्ना पनि एक-दुई गद्य काव्य लिएर म गुरुजीकहाँ पुगेँ । बडो भारी छलफल भो मेरो एउटा कवितामाथि । त्यसको शीर्षक थियो- ‘म पूजा गर्न जान्दिनँ- जाने पनि गर्दिनँ- सके पनि गर्दिनँ ।’ त्यसमा मैले यो देखाएको थिएँ कि आत्माको मुक्तिलाई मूर्ति पूजाको पथ एउटा रुढिवादी व्यर्थको सामाजिक ढोंग मात्र हो । ईश्वर जब सर्वव्यापी छन् भने उनलाई हृदयले चाहेको रुपमा किन नगर्ने ?
गुरुजीको भनाइ थियो, आत्मालाई बलियो पार्न मूर्ति पूजा गर्नु स्वाभाविक नै हो किनभने मुक्तिपथमा मानिसको यो पहिलो कदम हो । वहाँले दृष्टान्त दिँदै भन्नुभयो- ‘केटाकेटीले कुनै भाषा पढ्दा पहिले क, ख, ग वा ए, बी, सी पढ्नैपर्छ । त्यो अक्षरलाई बुझिसकेपछि क्रमश: ऊ आफ्नो विचार फैलाउँछ स्वतन्त्र रुपले । अनि पो पछि ऊ सोच्न सक्ने हुन्छ । अब त्यही केटाकेटीलाई अक्षर नचिनाएर हामीले स्वतन्त्र सोचोस् भनी छाडिदियौं भने उसको सोच्ने शक्ति नै बढ्ने छैन । …’
सम्झाउँदै गएर अन्तमा वहाँले भन्नुभयो- ‘ईश्वरको स्यानो माटोको मूर्ति ईश्वर नै होइन, जसरी कि भाषाको स्यानो क पनि सम्पूर्ण भाषा होइन, तर त्यही मूर्तिले एकदिन पुज्नेलाई ईश्वरलको विराट रुपको दर्शन दिन्छ, जसरी कि भाषाले साहित्यको ! भाषा जानिसकेपछि तपाईं जसरी चाहे सोच्नुस् … ईश्वरलाई जसरी चाहे पूजा गर्नुहोस् … केही हानि छैन ।’
त्यसबेला मैले जानेँ गुरुजी कुन किसिमको आस्तिक हुनुहुँदो रहेछ । मैले यहाँ समय र स्थानाभावलदे जम्मै छलफल त विस्तारपूर्वक दिन सकिनँ, यसमा खेद छ । कुनै दिन श्री लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जीवनगाथा लेख्ने अनुकूल मिल्यो भने छुटाउने छैन । तर, मलाई यो भन्न लाज छैन कि म गुरुजीको व्यक्तित्वले प्रभावित भएर फर्केँ । फर्कने बेलामा मैले गुरुजीलाई भनेँ- ‘मलाई पनि आफ्नो बाटोमा चेला बनाएर डोर्‍याउनुहोस् न गुरुजी !’
वहाँले हाँसेर भन्नुभयो- ‘तपाईंले आफ्नो बाटो पैलाइसक्नुभएको छ । मलाई भेट्न किन फेरि फर्कने मेहनत गर्नुहुन्छ ?’ मैले कर गर्दा वहाँले भन्नुभयो- ‘हेर्नुस्, नाइँ भनेको कारण यो हो कि तपाईँको आफ्नो शैली, आफ्नो विचार, आफ्नो प्रवाह बनिसकेको छ । त्यसलाई बिगारेर अर्को शैली, विचार र प्रवाह गर्दा समय र शक्तिको फजुलमा खर्च हुन्छ । फेरि शङ्कर शङ्कर नै हो र देवकोटा- देवकोटै ! दुइटाको आफ्नो-आफ्नो महत्त्व रहन दिनोस् । समयको फजुल खर्च नगर्नुहोस् ।’ र वहाँ हाँसिदिनुभयो । म पनि हाँसेँ , करै लाग्यो ।
अनि यो चाहिँ हालसालको कुरा: सल्लाहकार समितिमा गुरुजीको नाम मनोनित भैसकेको थियो । र, वहाँ राजनीतिमा पौडिरहन्भएको थियो । एक दिन मौका पारेर सोधेँ पनि- ‘होइन गुरुजी ! यो राजनीतिमा तपाईँ कसरी आउनुभयो ?’
गुरुजीले आफ्नो जीवनगाथा सुनाउँदै भन्नुभयो- ‘राणाशाहीको विरोधमा मेरो मन पहिलेदेखि लागिरहन्थ्यो ।’ र दृष्टान्त दिँदै वहाँले भन्नुभयो- ‘सन् १९३० मा बी.ए. फाइनल जाँच दिएर घर फर्केको मात्र थिएँ, केही साथीहरुले पब्लिक लाइब्रेरी (जनपुस्तकालय) खोल्ने विचार गरेर बनाएको कार्यक्रममा सही गराए । त्यसको करिब डेढ महिनापछि एकदिन भात खान लाग्दा त्यस बखतका प्रधानमन्त्री महाराज भीम सम्सेरको आठपहरिया आएर समातेर लग्यो । र, रातारात आँखा गरेर महाराजले हामीलाई ३-३ वर्षको जेल सुनाए । त्यस बखत मेरो ब्रह्म क्रोध जाग्यो तर केही गर्न सकिनँ । आखिर कसो-कसो कुरा बहेर १०० रुपियाँ जरिवाना र १२ वर्ष जनहितको कुनै किसिमको काम नगर्नेर् कागज गरिदिएपछि हामीले छुटकारा पायौं । हामीले त्यस बखत त्यही उपाय नै सर्वश्रेष्ठ ठहरायौं । … बी.एल. पास गरेर आएपछि मैले जब दिनको १२-१६ घण्टा ट्युसन गर्न थालेँ अनि त्यस बखत आफ्ना विद्यार्थीलाई सम्झाउन थालेँ कि नेपालमा प्रजातन्त्रको कति आवश्यकता छ । मेरो राजनैतिक जीवन त्यसबेलादेखि नै शुरु हुन्छ ।’
मैले सोधेँ- ‘के राजनैतिक जीवनले गर्दा, मेरो भनाइ अहिलेको जस्तो सक्रिय भाग लिएको खण्डमा, तपाईंको साहित्य र जीवनलाई हानि हुँदैन ?’
वहाँले भन्नुभयो- ‘राजनीति केमा छैन ?’ के हामीले सधैं खाइरहने दाल-भातमा आफ्ना अर्कै रुपमा राजनीति छैन र, राजनीति साहित्यमा पनि त हुन्छ । असलमा, साहित्य र राजनीतिको उठान एउटै हो- जब मानिसलाई वर्तमान परिस्थितिबाट वाक्क लाग्छ, र ऊ क्रान्ति, एउटा नयाँपन, एउटा चेन्ज चाहन्छ, त्यसबेला उसको मनमा त्यो फोहोर सफा गर्ने प्यास आउँछ- कोही कुचो लिएर आफैं बढार्न थाल्दछन् । बाटो देखाउने साहित्यिक र काम गर्ने राजनीतिक कार्यकर्ता । तर, ध्येय दुइटाको एउटै र इच्छा दुइटैको एउटै हो ।’
मैले सोधेँ- ‘दैनिक जीवनको स्तरबाट नउठेर साहित्यिक जब समाजमा साना-साना कुरामा र दैनिक राजनीतिमा अल्मलिन्छ त के उस बेला अमर कृतिहरु संसारलाई दिन सक्तछ ? मेरो भनाइ डे-टु-डे पलिटिक्समा लागेको साहित्यिकले कसरी सत्यं शिवं सुन्दरममा लेख्न सक्ला । फेरि गुरुजी, त्यस बखत लेखकले जब एउटा स्यानो परिधिसम्म समाजलाई डोर्‍याउने विचार गरेर लेख्छ र केही गरी समाज त्यसको पछि लागेर त्यस ठाउँसम्म पुगिहाल्यो भने त्यसै क्षण त्यो साहित्य बासी हुन्छ । जस्तो … स्यानो स्केलमा लिएको उदाहरणको लागि म कुनै पनि दैनिक खबरकागजको सम्पादकीय दर्शाउन सक्छु । तर, शेक्सपियरले लेखेका चिजहरु यस्ता छन् कि जुनसुकै समय, थान वा परिस्थितिमा पनि उही मौलिकता उही मिठास आउँछ । उनले पनि त्यस बखतको राजनीतिलाई लिएर लेखेको भए उनको त्यो नाम अन्तरदेशी इज्जत सायद हुने थिएन । तपाईंको के राय ?’
‘तपाईँको भनाइ कुनै हदसम्म ठीक हो । तर, मेरो भनाइ पनि तपाईंले राम्ररी बुझ्नुभएन । चलिरहेको सामाजिक जीवनलाई लिएर त्यसको सच्चा चित्रण गर्न गुण-अवगुण दुवैको आधारमा सत्यं शिवं सुन्दरमका साथ कुनै अमरकृति दिन सकिन्छ । शेक्सपियरले पनि त्यसबेलाको Elizabethan Period को छाप छ नि, उनले त्यस बेलाको समयलाई बहिष्कार गर्न सकेका छैनन् ।’
‘उसो भए आजकल Propagative Ideals लिएर लेखिएका लेख, कहानी, उपन्यासको बारेमा तपाईँको के राय छ ? जस्तो उदाहरणका निम्ति अमेरिकन साहित्य वा रुसी साहित्य ।’
गुरुजीले भन्नुभयो- ‘त्यो कमरसियल बेसिसमा गयो, त्यसमा उनीहरुले सिर्फ प्रोपगन्डा दिन खोजेका छन् ।’
मैले अर्को प्रश्न गरेँ- ‘तपाईँलाई चलिरहेको राजनैतिक विचारधारामा कुन चाहिँ प्रणाली वेश लाग्यो ?’
वहाँ हाँस्नुभयो ।
कुरा उल्टाउँदै मैले सोधेँ- ‘नेपालीमा विशाल क्षेत्र छँदाछँदै गुरुजीले किन अङ्ग्रेजीमा लेख्नुभएको ? र, लेखेर पनि अहिलेसम्म किन छपाउनुभएन ?’
वहाँले जवाफ दिनुभयो- ‘लेख्ने दुई कारण छन् । एक त मैले आत्मसन्तोषको निम्ति लेखेँ । म हेर्न चाहन्थेँ कि त्यतिका वर्ष अङ्ग्रेजी पढेर अङ्ग्रेजीमा मेरो कति दखल छ, र दोस्रो धेरै वर्षसम्म अरुलाई अङ्ग्रेजीमा पढाउँदा अङ्ग्रेजी बोलीको मिठास र शब्दको भण्डारसँग मलाई एक किसिमको मोह पैदा भएको थियो ।’
वहाँले हाँस्दै भन्नुभयो- ‘तपाईँसँग के ढाँटूँ, तिनताक सयकडा पचहत्तर मलाई अङ्ग्रेजीमा मोह थियो । त्यसको मतलब यो हैन कि नेपालीसँग मेरो प्रेम नै थिएन, तर तैपनि एउटा मोह । छपाउने कृतिहरु सायद त्यसबेलाका लागि थिएनन् ।’
मैले सोधेँ- ‘नछपाईकन र स्वस्थ समालोचना नभईकन तपाईँले कसरी आत्मसन्तोष गर्नुभयो ?’
वहाँले जवाफ दिनुभयो- ‘आत्मसन्तोष गर्नु अर्काको समालोचना चाहिन्छ र !’
यस प्रश्नको उत्तरले म हाँसिदिएँ ।
मैले सोधेँ- ‘तपाईँले नाटक, कहानी, निबन्ध र कविता सबै लेख्नुभएको छ, तपाईँलाई कुन चाहिँ मन पर्छ ?’
वहाँले जवाफ दिनुभयो- ‘सायद सबैभन्दा बढी कविता । किनभने मेरो अरु लेखनशैलीमा पनि कविताकै छाप परेको देखिन्छ । म कवित्वमय गद्य बाहेक शुद्ध गद्य लेख्न सक्दिनँ’ र वहाँले हाँसेर एउटा स्यानो अर्को शब्द पनि जोडिदिनुभयो- ‘समालोचक त्यसै भन्छन् ।’
‘तपाईँलाई आफ्नो कृतिमा सबैभन्दा प्यारो कुन चाहिँ छ ?’
‘खै, मैले कति लेखेँ, त्यो त मलाई थाहा छैन किनकि सयकडा पचहत्तर कृतिहरु हराए र पच्चीस मलाई राम्रो सम्झना छैन । तर पनि मलाई यस्तो लाग्छ, मैले चाहेको जस्तो अझै लेख्न सकेको छैन ।’
‘सायद थिचिएर शब्दहरुको परिधि परेर होला ।’
‘एउटा कुरा, आजकमाल तपाईँका लेखकहरु पहिले जति प्रभावशाली छैनन्, के तपाईंको जोश यो स्वतन्त्रताले झन् कम भयो ?’
वहाँले हाँसेर भन्नुभयो- ‘मेरो पनि अहिले अन्तरिम समय छ । एउटा परिस्थितिबाट एक्कासी अर्को परिस्थितिमा पुग्दा मैले आफूलाई आफूले नै राम्री सम्हालिसकेको छैन । नेपाली राजनीति झैं मेरो साहित्य पनि धमिलिएको छ र यो सङ्लो रहुन्जेल सायद म लेख्न पनि सक्दिनँ हुँला ।’
‘तपाईँको झुकाव कतापट्टि हुनेछ, त्यसकव अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ ?’
‘अहँ, तर जता झुके पनि त्यस बेला सायद केही स्वच्छन्दताले लेख्न सकुँला ।’
‘तपाईँलाई कुन चाहिँ कविले मूल प्रेरणा दियो ?’
‘नेपालीमा पूज्य पिता र लेखनाथजी, अङ्ग्रेजीमा वर्डस्वर्थ र शेली ।’ र, वहाँले हाँसेर भन्नुभयो- ‘पिताजी संस्कृतमा र कहिलेकाहीँ नेपालीमा काव्य रचना गर्नुहुन्थ्यो र मैले जीवनमा पहिलचो चोटि संस्कृतमा काव्य रचना गरेँ, त्यो पनि गीताको र पिताजीले यस्तो अशुद्ध संस्कृत पनि लेख्छन् भनी हप्काउनुभयो र मैले केही वर्षको विश्रामपछि पहिलो कविता १६ वर्षको उमेरमा रचेको थिएँ ।’
अब एउटै अन्तिम प्रश्न- ‘तपाईंलाई के लेख्ने इच्छा छ ?’
वहाँले भन्नुभयो- ‘महाकाव्य ! एउटा यस्तो काव्य, जसको वर्णनशैली अभूतपूर्व र उक्ति बिलकुनै नयाँ हुन् । जस्तै एउटी राम्री आइमाईको अनुहारलाई वर्णन गर्नुपर्‍यो भने चलिरहेको उक्ति छ पूर्णचन्द्र जस्ती ! यो उक्ति सुन्दा-सुन्दा अघाइसकियो । राजनीतिमा क्रान्ति आयो, साहित्यमा पनि क्रान्ति ल्याउनुपरेको छ ।’
मैले ठट्टा गरेर भनेँ- ‘यो तपाईंको पुनीत क्रान्ति अगाडिको शान्ति जस्तो भयो । अहिले तपाईँ विस्फोटक पदार्थ जम्मा गर्दै हुनुहुन्छ ?’ र, मेरो भनाइको व्यङ्ग्यमा पनि वहाँले गुलाबी रङ छरेर भन्नुभयो- ‘जसो भन्नोस् । यस्तो विस्फोट तपाईं पनि अहिले खर्च नगरी हाल्नोस् ।’
… र … मैले देखेको र बुझेको देवकोटाजीको खाका यही हो । देवकोटाजीको त्यस महाकाव्यको जन्मको प्रतीक्षा अरु साहित्यका पाठकले झैं म पनि निकै चाख लिएर गरिरहेछु ।
(विक्रम संवत २०२७’ सालमा प्रकाशित शङ्कर लामिछानेको निबन्धसंग्रह ‘विम्ब–प्रतिविम्ब बाट साभार गरिएको ।)